कुनै पनि लगानी बिना Online पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ? फेसबुक जस्तै वेबसाइट बाट पैसा कमाउनुहोस् | E-Trickszone, How To Guides And Tutorials
On 10:08 PM By Dipendra Neupane
हामी एकदम नयाँ वेबसाइटको साथ आएका छौं जसले तपाईंलाई online पैसा कमाउन मद्दत गर्नेछ। यस website मार्फत फेसबुकमा जस्तो पोष्टहरू र फोटोहरू पोस्ट गरेर तपाइँले यस साइटमा प्राप्त गर्ने हरेक Like को लागि पैसा कमाउनुहुनेछ।
तपाई लाई सुन्दा अनौठो लाग्ला तर येस्तो website पैले पनि रहेको छ। यो साइट Steemit भनिन्छ र धेरै मानिसहरूले यसका माध्यमबाट आफ्नो जीवनको लागि पर्याप्त पैसा कमाउँदैछन्। तर अहिले steemit मा कमाउन गाह्रो छ।
See : How I Earned 1000$ with Steem inaWeek? [Getting Started]
समान प्रकृतिको नयाँ वेबसाइट सुरु हुँदैछ र यदि तपाइँ यो वेबसाइटमा सुरू गर्नुहुन्छ भने तपाइँ यस वेबसाइटसँग सजिलै कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो वेबसाइटको साथ NRVE टोकनहरू कमाउनुहुनेछ जुन अनलाइन डलरसँग साट्न सकिन्छ।
आजै Register गर्नुहोस
कसरि सुरु गर्ने
1. पहिला तल दिइएको लिङ्कमा जानुहोस्।
2. त्यसपछि तपाईंको Email enter गर्नुहोस् र क्याप्चा solve गर्नुहोस् र Submit गर्नुहोस्।
3. अब तपाईंको ईमेल खोल्नुहोस् र तपाईंको account verify गर्नुहोस्।
4. राउन्ड अनलक भएपछि तपाईंलाई दर्ता गर्न ईमेल प्राप्त हुनेछ।
5. ईमेल प्राप्त भएपछि account register गर्नुहोस ।
अहिले नै दर्ता गर्नुहोस। जब मुख्य वेबसाइट केही महिनामा रिलीज गर्दा तपाईले NRVE टोकनहरू कमाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईले अहिले नै केहि नि: शुल्क NRVE टोकनहरू साथीहरूलाई Refer गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो Profile खण्डमा तपाईलाई Referral लिंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्न छ भने, तल comment मार्फत सोध्नुहोस्।
Online पैसा कमाउन तरिका हरु सिधै आफ्नो इमेल मा प्राप्त गर्न आफ्नो इमेल हालेर subscribe गर्नु होस्
Subscribe To Learn Online Earning